DHAGEEYSO:- Hooyo Soomaaliyeed oo ka sheekeynaysa dhacdo xun oo iyada iyo canugeeda qabsatay.
on August 28 2013 Waxaa gelinkii dambe ee maalintii Isniinta ahayd dab aad u xoogan oo qasaare geeystay uu ka kacay mid ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug, iyadoona dabkaasi damintiisa ay si weyn uga qeyb qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada.
Xeradaasi oo ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee dabka ka kacay ayaa sida la sheegay waxay ku taalaa xaafada Garsoor ee magaalada Gaalkacyo, waxaana gebi ahaan gubtay guryihii cooshashka ka sameeysnaa ee xeradaasi ku yaalay.
Ka dib markii uu dabka halkaasi ka kacay waxaa islamarkiiba goobtaasi gaaray mas�uuliyiin ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug, kuwaasi oo halkaasi kula hadlay warbaahinta, iyagoona sheegay inay baaritaan ku sameeyn doonaan waxyaabaha dhaliyay dabkaas iyo wixii qasaare ee ka dhashay.
Dadkii qasaaraha kasoo gaaray dabkaasi ayaa waxaa ka mid ah ahayd hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xabiibo Sheekh Axmed iyo canugeeda yar, waxaana ay sheegtay in dabkaasi ay ku gubatay xilli ay isku dayday inay soo badbaadiso canugeeda, inkastoo ay labadoodaba badbaadeen.
Waxay sheegtay xilliga uu dabka ka kacaayay xerada ay ka maqneed, balse markii ay soo noqotay ay aragtay meeshii oo dhan oo gubaneeysa, waxayna markaasi ku carartay aqalkeeda oo xilligaasi gubanaayay islamarkaana uu ku dhex jiray canugeeda yar, waxayna sheegtay inay ku guuleeysatay in canugeeda ay badbaadiso, balse wixii agab ee ka yaalay gurigeeda ay gubteen.
HALKAAN KA DHAGEEYSO HADALKA HOOYADA SOOMAALIYEED